Kubekho inkqubela sivumo uthando ukufumana basket - Ividiyo Dating USA
Kufuneka oludala girlfriend nina, kuba umhla buza ufuna. Okanye mhlawumbi kukho le kubekho inkqubela yakho iklasi, kufuneka kusoloko sele kukufutshane ukuba babefuna ukuba kuza, kodwa zange wakwazi njani baba nicinge ukuba uyenze. Kulomboniso, Dating USA inqaku, uza ukufunda njani a kubekho inkqubela imizwa yakho, sivumo, hayi kuba dismissed. Kufuneka oludala girlfriend nina, kuba umhla buza ufuna. Okanye mhlawumbi kukho le kubekho inkqubela yakho iklasi, kufuneka kusoloko sele kukufutshane ukuba babefuna ukuba kuza, kodwa zange wakwazi njani baba nicinge ukuba uyenze. Kulomboniso, Dating USA inqaku, uza ukufunda sivumo, njenge nani, kubekho inkqubela imizwa yakho ngaphandle ekubeni asivunywanga.
Thetha malunga nayo yangasese. Uphephe-imeyl kwaye phezu phezulu romanticcomment Gestures. Sebenza kuwe. Zikhathalele yakho outer imbonakalo kwaye yenza into ubomi bakho. Ukuba bathenge omkhulu izakhono ezitsha. Akunyanzelekanga ukuba ibe no – romantics. Jonga indlela yena uphendula izincomo kunye nokuchaza yakho”ndithanda wena”. Xa uyancuma, bomvu, kancinci embarrassed yachukumisa okanye nge efanayo amazwi, uphendula, yena waziyo ncam into ofuna. Yenza detour nje ukuya kuhlangana nani, ukuba kuphela kuba omfutshane ngokwe xesha:”ndinguye tonight nawe kule ndawo ufuna ukuya kwi-ezindleleni kuba ikofu kunye nam.”Ukuba uya kuvuma yakhe imizwa yakho, kufuneka ingabi yenza ngqo, xa iqelana abantu bakhona. Oku kunokwenziwa xhobani nani phantsi koxinzelelo kwaye unwell ukulungisa yakhe, kwaye yena uziva ngathi usasebenzisa compelled ukuze, mhlawumbi, dibanisa impendulo. Hamba kunye yakhe ukuya beautiful, uzole ndawo kwaye qiniseka ukuba yena ngu relaxed phambi kokuba unikezelo kuwe intliziyo yakho uvavanyo. Bavumeleni siyazi ukuba wena musa njenge kwabo yakho kufuphi, kwaye ukuba lenza wakhe usoloko fun. Bamba kuwe kuba ngexesha elifutshane, ngoko uyakwazi ngokukhawuleza ukufumana i-incopho. Lo tricky isiqingatha, kodwa ukuba ndikwazi ukuphefumla kakuhle kwi-nzulu, phezulu ukuya kwisithathu ubalo, kwaye kulula ukufumana phandle, uza uzive ngcono kakhulu. Njengoko ixesha elide njengokuba kubhaliwe ivela intliziyo, kufuneka nekratshi yakho isibindi. Mhlawumbi konke oku kuza olugqityiweyo surprise kuba yakhe kwaye yena iimfuno ixesha ukufumana phezu eyakho uvakalelo kwi-Gca. Kuyinikela eli lixa.”Andicingi ukuba ufuna ukuba uzive okungekuko okanye pressured. Ndifuna ukuqondisisa ukuba vumelani uyazi njani ndikuvayo malunga nawe.Ndiyazi ukuba lo mkhwa sudden. Mna ngokuqinisekileyo waba ngaphezulu ixesha yokucinga ngayo kunokuba ufuna ukuzenza. Kodwa ndiza apha kuwe, ukuba uthetha vetshe malunga ufuna.”Propose othile umhla kunye nexesha kuba idinga lakho. Ukuba ufaka kanjalo anomdla ngaphezu nje friendship, ungakwazi ukwenza nge beautiful ngokuhlwa ibonakale”officially Mna ke ngoko ndonwabe xa sisebenzisa kunye, kwaye ndifuna ukwenza kuni njengoko ndonwabe njengoko kufuneka wenze kum. Ingaba ufuna ndinike le Ithuba, kwaye ngomhla wama-ngokuhlwa kufumana isidlo sasemini kunye nam.Ndinqwenela ukufumana ukwazi kwam ukuva honored, ukuba ubuya undinike Ithuba, wena ngcono. Ufuna kule veki iphelileyo kunye”Unguye ka-Imidlalo Yevidiyo”exhibition.Tshini, ndathola Tickets kuba umdlalo kwi-veki iphelileyo. Ndicinga ukuba bekuya kuba mkhulu ukuba ufuna ukungena kwam ingaba, ngoko ke singadibanisa entertain ezimbini kuthi kancinci kakhulu.”Yintoni ubona kwi amaxwebhu, akuthethi ukuba umsebenzi yokwenene ebomini. Nje kuba ngokwakho kwaye musa ukwenza oko enzima ngakumbi kunokuba yinto – kuphela kuyimfuneko ukuba sivumo, kuye imizwa yakho. Nazi ezinye izinto kufuneka ngokuqinisekileyo uphephe:”ke Ukuba akasoze abe kunye, ndifuna hayi kuba abahlobo bakho kunye nawe.”Ezi kwaye efanayo ultimatums ukuba aphele aze aninike a engalunganga ndinovelwano. Hayi kakuhle kakhulu romanticcomment gesture.”Mna anayithathela sele emi kuba iinyanga kwi nani.”Kuba njengoko kukhulula kangangoko kunokwenzeka. Kufuneka bazive ethambileyo, bekhuselekile, asingabo bonke of a sudden i gun kwi-axis powers.”Ndithanda ungathanda Winnie i-Pooh i-nobusi, efana gummy ubungqina gang yakho juice. Ligcine elifutshane crisp, kwaye kwenzeka kwinqaku. Ukwenza abahlobo kunye kubekho inkqubela, ngokuthi ingabi thatha inxalenye abahlobo bakho kwaye waziwa isangqa. Ukungena Uncwadi, apho oko kukuthi, okanye hanging ngaphandle ngexesha amaqela okanye Iintlanganiso apho wena Ukhuseleko iya kuba kaloku. Ushiya kwi kobuso benu remind kuwe kaninzi kunye yakhe, kwaye uza kamsinya kuba okulungileyo abahlobo. Ukufumana phandle into pleases kwayo, kwaye ngubani na. Funda zabo idiosyncrasies kwaye quirks. Ngoko ke kufuneka ukuba sele kwi-indlela eya empumelelweni, ngenxa girls musa efana ngayo, xa ufuna kuphela anomdla kuzo ngenxa yokuba ingaba pretty. Ufuna umntu ukuba ikuqonda ufuna ngokwenene. Thetha yakhe malunga izinto ngathi Inkolo, politics, yakho hometown, usapho lwakho, kwaye enye ebalulekileyo izihloko.
Babbles kanjalo bullshit
Kufuneka kuyinikela ithuba kuhlangana nani. Qala i-mnandi incoko abayo kwaye vumelani wakhe ixesha elininzi uthetha, kodwa ungene wonke ngoku kwaye kwakhona. Inkxaso kuni na yenza wena ndonwabe. Ndinenza ebukekayo, mhlawumbi uza kanjalo Efana nayo. Nkqu ukuba akunjalo: utyelelo performances zabo theater okanye performances. Kufuneka bazi ukuba wena”get ngayo”, apho ufuna ulungisa yakho uvuyo ebomini. Kufuneka uyazi kanjalo eyakho ezinzulu. Kukho into ethile kakhulu Infectious kunye Nabafana. Ngaba kuba okulungileyo umhlobo nge ekubeni kukho kuwe xa yakho embi, ufuna uncedo wakhe, ngu-ukwenza kuni Laughter kwaye fun ebomini bakho care, xa uthatha ixesha ngaphandle ukwenza into ethile. Musani ukoyika le”Umhlobo Label”: Ukuba usebenzisa ngenene i kstars ngamnye enye, ayinamsebenzi, njengoko ixesha elide njengoko abahlobo bakhe baba, yena uya reciprocate imizwa yakho. Kufuneka bakwazi ukuzithemba kwakho. Yakho loyalty phambi kwenu buza kwabo nantoni na Kumhla, kwaye musa vumelani yakhe babambisa kuwe flirting kunye nezinye girls okanye hanging ngaphandle kakhulu kunye nezinye girls. Share yakho secrets kunye yakhe, njengokuba yena kanjalo izahlulo yakhe kunye nawe. Isigwebo kuwe zange okanye laughing ngalo kuni ngenxa yezinto baya onikwe kuwe. Kuyinikela i-ndinovelwano ukuba yena unako thetha nawe malunga yonke into. Ukuba ufuna, ukuze nibe bakhulisa uvakalelo kuwe, kufuneka okungakumbi ukuze yesibini inkampani ukuze kakuhle ukuze ukwazi ngamnye enye. Ngaba umbuzo nokuba ufuna wena hinbegleiten kwenye indawo, nto nje, Umhla kodwa nje abahlobo. Ungajonga ngokumema ekhayeni lakho ukuze athabathe abayo into ethile (umzekelo, ifilim kuwe akhange na okubonwayo, okanye dlala ividiyo imidlalo) kufuneka bazive okulungileyo xa yena ke nawe. Kufuneka bazive ebalulekileyo kwaye umzimba wakho bazive okulungileyo. Kuyinikela izincomo, ingaba zange kuyivala phantsi, kwaye sibakhuthaza rhoqo ukumsukela iinjongo zabo. Vumelani yakhe ndiyazi ukuba yena sele a knack kuba into, nkqu ukuba ke nje into Mundane, nje ekuncedeni abanye abantu. Abantu abaninzi hesitate ukuqala budlelwane, ngenxa yokuba ukoyika kuba enomda kwaye unako ayisasebenzi kuba ngokwabo. Ucinga ukuba uza zange kwakhona kuba ixesha kuba ngokwakho, zange kwakhona kunye abahlobo bakho okanye bakholelwa ukuba bamele waqwalasela nge abantu ngokwahlukileyo. Ukuma ngaphandle ukusuka kwelinye kwaye bonisa yakhe ukuze wenze oku Fears wena musa kufuneka ube. Landela eyakho umdla kwaye kuyinikela isithuba ukwenza kwezabo nto. Alikwazi ukwahlula esiphelweni sehlabathi ukuba ke ubani kuni emva. Uza kuba ezibuhlungu, kodwa ukhe ubene kanjalo umntu Omtsha. Uvakalelo okanye ubudlelwane akasoze abe banyanzeleka. Okufaneleyo ukuba ingaba umntu njenge nani ngendlela efanayo. Alikwazi ukwahlula yakho fault ukuba uphelelwe lwe imizwa yakho kwaye alikwazi ukwahlula yakho fault: Abanye abantu nje musa ukungena ngamnye enye. Ungakhe umsebenzi ngakumbi kuwe, kuwe, Ixesha elizayo kufuneka kuvuma ukuba kubekho inkqubela imizwa yakho, yakho eyona icala bonisa. Le kuphela indlela uza kufumana kubekho inkqubela abo baya reciprocate imizwa yakho. Kubalulekile nje kancinci scary, kodwa kufuneka sivumo imizwa yakho kwi-umntu. I-SMS, I-Imeyile okanye abahlobo njengokuba uthetha babantu ingaba zonke iindlela ukuze ukwazi nje childish umthetho kwaye ukuthutha kuwe, zingangahambelani ke seriously zam. Ukuba asinaphawu zikhathalele zethu umzimba, thina musa ukunikezela ngoko ke ukuba siyakwazi ukuba zikhathalele abanye, okanye ngathi abanye abantu. Nisolko omkhulu kwaye kufuneka nkqu kunjalo ukuphatha. Ngokubhekiselele ngokwakho kwaye siphathe umzimba wakho ngokufanelekileyo. Ukuhlamba yithi rhoqo, sebenzisa deodorant, wear coca neempahla ukuze fit kwenu, kwaye okulungileyo kwi ngaba ikhangeleka ngathi. Akukho namnye ifuna ukuba ube kunye umntu lowo wenza nto kwaye nto. Bonisa girls ukuba ukhe ubene-a ukusebenza kakuhle, umdla umntu, nguwe get phezulu kwi Couch, kwaye yintoni ekufuneka uyenze. Emidlalo, fundani ukwenza omtsha ubuchule, ukungena Uncwadi, concentrate ukuya esikolweni: yintoni fun kuba kuni. Wonke kubekho inkqubela, yintoni ukuva kuwe okanye uza kwazi ukufunda ukuncoma kuwe njengoko elungileyo abantu. Umsebenzi egameni lakho personality, ukuba ufuna izinto ngenye indlela kodwa mna-embindini. Ukusoloko polite abantu jikelele wena umsebenzi, mhlawumbi nkqu kwi kungokuzithandela qho. I-kuzoba uhlobo okulungileyo kubekho inkqubela ufuna kuba, magically. Ukuba ebomini bakho nto enye into kukuba kokuya kwi, ungakwazi tsala nge elihle isakhono okanye Talent? ukutsala i-ingqalelo a kubekho inkqubela kwi nani. Ukuba usenama-kuba nto, yintoni nisolko okulungileyo kwi, ngoko ke oku Ithuba kwaye get ukuthatha into Entsha. I-babotshelelwe ukwenza i-impression kwi-girls kwaye kuya kukunceda kakhulu kwi-sebenzisa ixesha elide. Ukwenza oku, kufuneka ufumane ukwazi ngaba mhlawumbi okanye abahlobo bakho yakho izicwangciso inaugurate. Yena sele baphoselwe ngeliso ngomhla omnye ezinye iintlobo, uza encounter neqabane lakho vuma kwi iindlebe zezithulu. Nkqu ukuba yena sele inzala kwi umntu ongomnye, uyakwazi zama yakho comment, wena nangona kunjalo, iimini ezimbalwa imbandezelo. Hayi wonk ubani Asebenzise kuyo. Ukuba ukhe ubene besoyika ukuba kuyibuza kuwe, ngenxa yokuba wena kuba akukho unye ntoni ukuba nicinge ukuba uthi: musa worry, alikwazi ukwahlula njengoko nzima njengoko kubhaliwe yekratshi. Mna-ukukholosa ngu-A no-O xa usombulula kunye umntu kuni ngathi. Mna-uqinisekile imbonakalo lenza nabafana kwaye worthwhile ukufunda ukuba wena neqabane lakho girls ufuna. Ukuba kubekho inkqubela ukuba ngenene uzakukhula ngamandla uvakalelo kuwe, kuxhomekeke nje njani ukulunga kwenu basemazweni interviews. Funda ukuqala ngcono iincoko, kwaye baphile, kwaye pretty kungekudala uza ufuna ngakumbi kuwe ebomini bakho. Kuba polite ukuba abahlobo bakho. Musa kuba overly eyobuhlobo, kungenjalo baya ukuba ukhe ubene omnye Abahlobo bakhe.
Ukuba ubona nabo ngexesha ufaka itsala Nzima into, thabathani, ze urhuqe yona apho ufuna oko. Ukuthetha ukuba uya kuba nzima ixesha kunye nawe, jonga phezu yakho shoulder, ngoko ke, ikhangeleka njengoko ukuba ngaba ayeza jonga kulo. Ukuba ufuna ukufumana ngomzuzu wokugqibela panic, get ukwazi yakho esikolweni a pretty kubekho inkqubela, mema ukuba isidlo sasemini, get ukwazi yakhe, enkulu umbuzo, kwaye ulungile. Ngaba sivumo imizwa yakho kwaye ukuba ke ubani kuni emva, nindivavanye yakho manhood kwaye vumelani yakhe khona. I esithi, ukuba wena ukuthanda into, makube free. Chaza ukuba yena ubuqu ukuba ungathanda yakhe. Wena musa umnxeba, bhala i-SMS, kodwa kuthi ke kuye ubuqu. Oko kungenzeka scary, wena zithetha ngakumbi, kwaye kulula kakhulu kwaye ngaphantsi embarrassing ukuba bathethe umntu ubuso ubuso
← Isijamani abafazi get ukwazi kwam: mentality kwaye iimpahla
Omdala Dating kwi Hookup ikhangela A Discreet Sexy Unxulumano →